Iimoto | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokuhlamba iipowlar buds ekhaya? Indlela yokuhlamba iimpawu zeepallar ezivela kumatshini?
Kamsinya nje ukuba ubusika buphele neengxaki zazo ngohlobo lwezinto zokutshisa ezonakalisayo ezivela ezindleleni, kwaye abaqhubi beemoto bakwazile ukuphefumla ukukhululeka, xa enye ingxaki engathethekiyo ivele kolundi. Le yimipopula, ...
Hlala phantsi kwebhetri, njani ukuqala imoto? Ungaqala njani imoto ngokwakho ukuba ibhetri ihleli phantsi
Imeko xa ibhetri isilele iqhelekile kuye nawuphi na umnini moto. Njengomthetho, oku kuyenzeka ngela xesha lingafanelekanga kwaye kusongela ngeengxaki ezinkulu kakhulu. Ukuba kwimeko yeedolophu, ukukhutshwa kwebhetri kusongela ukulibaziseka ...
Iifoto ze-Chevrolet: umgca
Nangona kunjalo, iilori zezona zixhaphakileyo eMelika. Ngapha koko, iMelika lilizwe labo. Imbali yemoto yaqala ngombono we-banal. Abaphuhlisi benkampani "yeChevrolet" (iveni yathathwa yaduma ...
Lada Kalina kwisikhululo senqwelo kunye ne-hatchback: iinkcukacha zobugcisa. "Lada Kalina 2" - imoto entsha yesizukulwana
Ngo-2013, `` AvtoVAZ '' wavuya abaqhubi beemoto kunye kraca entsha, apho phantse zonke iinkcukacha ziye zaphuculwa. ILada Kalina 2 yimoto ehamba phambi kwevili elinendawo yokuhlala ephezulu kunye nendawo yangaphakathi enkulu ...
Luhlobo luni lwemoto ekuthengayo kwi-200000? Thenga imoto eRashiya: amaxabiso, iingcebiso zeengcali, ukuphonononga
Ke yeyiphi imoto ekufuneka uyithenge ngama-200000? Ngapha koko, kukho inani elingenakulinganiswa lokukhetha. Njengoko besitsho - kuyo yonke incasa kunye nombala. IsiJamani, isiJapan, isiRashiya, isiMerika-nantoni na ...
Ukutshintsha i-crane heatater ye-VAZ-2114 yenza ngokwakho
Ivalve heater kwiimoto VAZ-2114 yenye yezona ndawo buthathaka kwinkqubo okupholisa. Iphuka rhoqo kangangokuba uninzi lwabanini beemoto, banamava, bayitshintsha ibe ...
Isithuthuthu se-diesel esakhiweyo. Isithuthuthu se-Diesel yenza oko
Uyilo lwesithuthuthu kunye nenjini yedizili yaqanjwa phantse ngexesha elinye. Nangona kunjalo, ezi zixhobo zihambe ngeendlela ezahlukileyo zokuzivelela kwezinto. Bambalwa ababenokucinga ukuba ngolunye usuku ezi zoyilo ziya kusebenza ...
Yintoni i-carssover (imoto)? I-SUV kunye nee-crossovers
Ii-SUV kunye nee-crossovers zizithuthi ezinamandla amakhulu. Bobabini esixekweni nangaphandle kweendawo zokuhlala, ngabahlobo bakho abathembekileyo. Yintoni i-crossover (imoto) iiCrossovers zintsha ...
I-Backhoe Loader I-JCB 3CX Super: iinkcukacha zobugcisa, incwadi yokufundisa
Inkampani yaseBritani iJCB yaziwa kwihlabathi liphela ngomgangatho ophezulu wokulandela umkhondo kunye nezixhobo zokwakha ezinamavili. Abalayishi be-Backhoe bahlala kwindawo ekhethekileyo kwi-assortment yenkampani. Enye yeemodeli ezidumileyo zobu buchule ...
"Lada 2170" ("Priora"): ukucacisa, ukubuyekeza
I-Lada Priora-2170 yimoto yokuqala eveliswa yi-AvtoVAZ ngo-2007 njenge-sedan. Emva kwexesha, ngo-2008, i-hatchback yangena kwimveliso enkulu, kwaye ngo-2009 isikhululo senqwelo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ...
I-KAMAZ-65115: iinkcukacha zobugcisa, inkcazo, iifoto
I-KamAZ-65115, iinkcukacha zobugcisa eziza kuboniswa ngezantsi, zenziwe ukususela ngo-1995. Itraki yaqala ukuthengiswa ngo-1998. Itrakhi yokulahla inkunkuma ilandelwa kwaye ithulwe ngasemva. ...
Kutheni kuthambile ifilimu ye-vinyl kwimoto? Indlela yokubambisa ifilimu kwimoto. Iyiphi inkampani ethenga ifilimu ye-vinyl
Namhlanje, isitayile sezithuthi senziwa ngeendlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, eyona idumileyo kukusonga imoto ngefilimu yevinyl. Le nto iyafumaneka kubavelisi abaninzi. Uhlobo oluphangaleleyo lukhulu kakhulu ukuba ukhetha oluchanekileyo ...
I-Patron Taker 250: ukuphononongwa, iinkcukacha, iifoto, isivinini esikhulu
Umxhasi wesithuthuthu sama-250 unembonakalo ekhohlisayo. Ekuhlolweni okubonakalayo, umntu ufumana umbono wokuba le yimodeli endala ye "Japan". Kodwa bobabini abaqeqeshi kunye nabadlali abahamba ngesithuthuthu baya kuthi, ...
Ngaba kufuneka ndihlambe injini xa nditshintsha ioli: uluvo lwengcali
Ngaba i-injini kufuneka igungxulwe xa kutshintshwa ioyile? Kwiindawo ezininzi zokuzonwabisa unokufumana iingxoxo ezishushu zalo mbandela. Abaxhasi bawo omabini la manqaku okujonga baqinisekile ngekhulu leepesenti ukuba zichanekile, becaphula zonke iintlobo ze ...
"Lada Granta" sedan: iinkcukacha kunye nohlaziyo abanini
"I-Lada Granta" (sedan) ligama lohlahlo-lwabiwo mali lwevili eliqhutywa ngaphambili, eliphuhliswe yiVolga Automobile Plant. Imodeli yeLada Kalina yathathwa njengesiseko. Imveliso ye-serial iqale ngo-2011, kwaye ngo ...
Ioli yeoli: i-shelf life, ukukhethwa, ukugcinwa
Nawuphi na umqhubi wemoto, kwaye ngakumbi kwabaqalayo, unomdla kumbuzo wokuba yeyiphi i-oyile ye-injini ayikhethayo kwimoto yakhe, kwishelufa ubomi, ukwakheka kunye nezinye izikhombisi. Bathi ekupheleni kobomi bayo benkonzo, njenge ...
Kutheni kubakho nkqonkqo xa uphendulela isondo ukuya ngasekunene, kwesokunxele?
Kwinqanaba lokuqala lokuba nemoto yobuqu, umnini ujolise ikakhulu kwimeko yendlela. Ixesha elingaphezulu, ukuqonda kweempawu ezithile zemoto yakho kuza. Kuyenzeka ukuba uzibonakalise ngokwakho ukonakala kwemoto (kwavela ...
Ukunciphisa ubunzima bezithuthi kukulinganisa ubunzima bokuqala
Kwindawo yeemoto nayo yonke into edibene nazo, kukho iikhonsepthi ezimbini ezinje ngobunzima bezithuthi kunye nobunzima bokunqanda. Ezi ziimpawu ezimbini ezisoloko kuthethwa ngazo kwiiklasi zethiyori ...
Inkinobho ye window yeWAZ-2110 ayisebenzi
Ukuba iqhosha lolawulo lwefestile emotweni liyayeka ukusebenza, ukuqhuba kweso sithuthi kunokuba yinto embi. Ifestile evulekileyo ebusika ebandayo okanye evaliweyo kubushushu behlobo- icacile le nto ...
Chevrolet-Niva, ndlwana filter: indawo. I-Chevrolet Niva eyenziwe yi-GM-AvtoVAZ
Imoto yeNiva Chevrolet yenye yeemodeli zokuqala eziveliswa yiAvvaVAZ, apho kufakelwe khona icebo lokucoca ulwelo. Eli nqaku lidlala indima ebalulekileyo. Malunga nolwakhiwo lwayo, iindidi kunye nokutshintsha - ngaphezulu ...
Page 1 Page 2 ... Page 22 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,004.